नेपाल आज | भनियो उद्दार, गरियो भेदभाव ! पैसा हुनेलाई ल्याउने, नहुनेलाई अलपत्र छाडिदिने ?
भनियो उद्दार, गरियो भेदभाव ! पैसा हुनेलाई ल्याउने, नहुनेलाई अलपत्र छाडिदिने ?
मदन बस्नेत । बिदेशी भूमीमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले उद्दार कार्य थालनी गरेको र विशेष चार्टर बिमानको ब्यबस्था गरेको समाचारले उत्साहीत नेपाली कामदारहरूको हर्ष धेरै बेर टिक्न पाएन। पैसा तिर्नेहरुको उद्दार हुने र पैसा तिर्न नसक्नेहरुको नेपाल सरकारले उद्दार नगर्ने भेदभावपूर्ण र पक्षपाती नीतिले बिदेशमा अलपत्र नेपालीहरुको अन्ततः कन्तबिजोग हुने भएको छ।
आफ्नो साथमा भएको र कम्पनीले दिएको टिकटमा उड्न नपाइने, घर फर्किने भए नेपाल सरकारले बन्दोबस्त गरेको अतिरिक्त भाडा तिरेर नयाँ हवाई टिकट किन्नुपर्ने प्राबधानको सरकारी उद्दार नीतिले बिदेशी भूमीमा बिचल्लीमा परेका नेपाली कामदारहरुलाई खासै लाभ पुगेको देखिदैन। पैसा हुने घर फर्कन पाउने र पैसा नहुनेहरु उतै भोकभोकै बस्नु पर्ने नियती आईलागेपछ सरकारले सुरु गरेको उद्दार सेवा उनीहरुकोलागी "कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात" भएको छ।
प्राथमिकताको आधारमा अत्यन्तै अप्ठेरोमा परेकाहरुको उद्दार सबैभन्दा पहिला गर्ने भन्ने सरकारी दाबी पनि हावादारी साबित भएको छ। पैसा हुने र जहाजको टिकट किन्न सक्नेहरु प्राथमिकताको उपल्लो श्रेणीमा परेका छ्न् भने निर्धन र वास्तविक पीडितहरु, घरको न घाटको भएका छ्न्।
काम र दाम दुबै नभएका र सहयोगी दाताहरुसँग मागेर गुजारा चलाइरहेकाहरुको त झन कन्तबिजोग नै भएको छ। घर फर्कौ, कसरी फर्कौं ? बरु यतै मर्छौं भन्नू परेको छ। यो बेला एयरलाइन्सहरुले नाफा कमाउने बेला हैन तर बिडम्बना, नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बिमानबाट गरिन लागेको उद्दारमा नै भ्रस्टाचार भएको समाचार आइरहेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको चार्टर्ड उडानको भाडादर हेर्ने हो भने पनि नियमित उडानको भन्दा चार गुणासम्म महँगो छ।
हो, रहरले बिदेश घुम्न जानेलाई राज्यको सम्पत्ती सिध्याएर उद्दार गर्न जरुरी हुन्न। तर देशभित्र रोजगारी नपाएर परिवारको पेट पाल्न ऋण काढेर बिदेश भाँसिन बाध्य नेपालीलाई "खाए खा, नखाए मर" भनेर घाँटी न्याक्नुलाई कसरी न्यायोचित ठहर्याउन सकिन्छ ?
अहिले नेपालमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएको छ तर त्यस बिपरित लकडाउन भने खुकुलो पारिएको छ। हवाई प्रतिबन्ध भने अझै पनि फुकुवा गरिएको छैन। त्यही मौकाको फाईदा छोपेर उद्दारको नाममा राज्यले नै व्यापार गर्दैछ र घर फर्कन चाहने नेपाली कामदारहरुलाई चार्टर बिमानको टिकट खरिद गर्न उर्दी जारी गरेको छ। लज्जाबोध गर्नुपर्ने यस्तो विषयमा सरकार छाती ठोकेर हिंडिरहेको छ।
जहाँसम्म धेरै नेपाली एकैपटक स्वदेश फर्किए मुलुकले धान्न सकिन्न भन्ने सवाल छ, त्यसकालागि होम क्वारेन्टाइनको बिश्वब्यापी प्रयोग र अभ्यासलाई अबलम्बन गर्दा भइहाल्थ्यो। त्यसरी घर फर्कनेलाई वडा, गाउँ र प्रहरीको सहयोगमा स्थानीय तहमा निगरानी गर्न पनि सकिहालिन्थ्यो। तर त्यसो गर्न होल्डीङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनको ब्यापार गर्नेहरुले दिईरहेका छैनन्।
समस्यालाई यथास्थितिकै जस्तो चल्न दिने र आलटाल गर्दै पन्छाउँदै जाने हो भने परिणाम सोचेभन्दा निकै गम्भीर र घातक आउने देखिन्छ। जसरी समयमै अल्सरको उपचार नगरेर वेवास्ता गर्दा क्रोनिक क्यान्सरमा परिणत हुन्छ, ठिक त्यसरी नै कोरोनाका कारण बिदेशमा अलपत्र परेका र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई पनि समयमै स्वदेश फर्काउन सकिएन भने स्थिति भयावह बन्ने देखिन्छ।
(हाल क्यानाडामा रहेका बस्नेत भक्तपुरका स्थानीय हुन ।)